စိတ်ကျန်းမာရေးမကောင်းလို့ သံကြိုးချည်ထားရတဲ့ မိန်းကလေးကို မုဒိန်းကျင့်ဖို့ကြံစည် – MEDIALANN
စိတ်ကျန်းမာရေးမကောင်းလို့ သံကြိုးချည်ထားရတဲ့ မိန်းကလေးကို မုဒိန်းကျင့်ဖို့ကြံစည်
စိတ် ကျန်းမာရေးကြောင့် အိမ်မှာသံကြိုးချည်ထားသူမိန်းကလေးကို အဓမ္မပြုကျင့်ရန်ကြံတဲ့ဘေးအိမ်မှ လူကို ရပ်ကွက်မှ ၀ိုင်းဖမ်း
စိတ်ကျန်းမာရေး မကောင်း၍ နေအိမ်တွင်းမှာသံကြိုးချည်ထားသူအမျိုးသမီးကို အဓမ္မပြုကျင့်ရန်ကြံစည်သောဘေးအိမ်မှ အမျိုးသား ကိုဖမ်းဆီးအမှုဖွင့် . .ရွှေပြည်သာ မေလ ၅ ရက်
ရွှေပြည်သာမြို့နယ် ဘုံရှည်ကုန်းရပ်ကွက်တွင် ခြံချင်းကပ်လျှက် နေထိုင်ပြီး စိတ်ကျန်းမာရေးမကောင်းသည့် အသက်၂၀အရွယ် အမျိုးသမီးအား အဓမ္မပြုကျင့်ရန် ကြံစည် အားထုတ်သူအမျိုးသား ကို ဖမ်းဆီးအမှုဖွင့်စစ်ဆေးနေ ကြောင်း ဒေသခံများထံမှသိရသည်။
ဖြစ်စဉ်မှာ —ရွှေပြည်သာမြို့နယ် ဘုံရှည်ကုန်းရပ်ကွက် ဝါးရုံမြိုင်လမ်း အမှတ်၈/၅၈ နေ ဦးကျော်ကျော်သွင်၏သမီးဖြစ်ပြီး စိတ်ကျန်းမာရေး မကောင်းသူ မ— ၂၀ နှစ် သည် မေ၁ရက်နေ့နံနက်၉နာရီချိန်ခန့် က နေအိမ်ရှေ့ခန်း တွင်ရှိနေစဉ် ခြံချင်းကပ်လျှက် ဘေးအ်ိမ်မှ
ဦးမြင့်သိန်းဦး (၄၈)နှစ် သည် နောက်ဖေးပေါက်မှရောက်ရှိလားပြီး မအေးမွန်ကျော်ကို အဓမ္မပြုကျင့်ရန်ကြံစည်ခဲ့၍ ဖခင်ဖြစ်သူက ရွှေပြည်သာ လှော်ကားနယ်မြေရဲစခန်းသို့ အမှုဖွင့်တိုင်တန်းခြင်း ဖြစ်ကြောင်းတိုင်တန်းချက်အရသိရသည်။
သမီးကစိတ်ကျန်းမာရေးမကောင်းလို့ အိမ်ထဲမှာပုခက်နဲ့သံကြိုး ချည်ထားတာပါ ဒါကို လာပြီးလုပ်တာပါ ပြစ်မှုကျူးလွန်သူက ဘေးအိမ်ကပါ မြင်တဲ့သူက မခင်မြတ်မွန်ထွေး အသက်(၁၂)နှစ် (၄)တန်းကျောင်းသူ ကျွန်တော့သမီးအငယ်ပါ
သူကအိမ်ရှေ့ မှာကစားနေတုန်း သူအမ အေးမွန်ကျော်အိမ်ထဲကနေ အော်သံကြား လို့ အိမ်ထဲပြန်ပြေးဝင်ကြည့်တာ အမဖြစ်သူဘောင်းဘီကျွတ်နေတယ် မြင့်သိန်းဦးက ပုဆိုးကွင်းသိုင်းနဲ့တွေ့ရတယ်တဲ့ သမီးက မြင့်သိန်းဦး ကို ငါ့အစ်မကိုဘာလုပ်တာလည်း အော်ပြောပြီး အပြင်ထွက်ကာဘေးလူတွေကို အော်ဟစ်အကုအညီတောင်းပြီး ဖမ်းလိုက်ကြတာပါ။
ကျွန်တော်လည်းနေ့ချင်းပဲအမှုဖွင့်ိလိုက်တယ် အမှုစစ်ကစခန်းမှူးကိုယ်တိုင်ပါ။ ပုဒ်မက (၃၇၆ /၅၁၁)ပါ။ဟုတရားလိုဖြစ်သူ မ–၏ဖခင် ဦးကျော်ကျော်သွင်ကပြောသည်။
ယင်းအမှုအား ရွှေပြည်သာလှော်ကားရဲစခန်းမှ ရွှေပြည်သာမြို့နယ် ဝါးရုံမြိုင်လမ်း ၈/၅၇ ဦးထွေးတင်၏ သားဖြစ်သူ မြင့်သိန်းဦးအားရာဇသတ်ကြီး ဥပဒေပုဒ်မ ၃၇၆/၅၁၁တို့ဖြင့်အမှုဖွင့်စစ်ဆေးလျှက်ရှိသည်။
မေလ ၂ ရက်က အင်းစိန်ဆေးရုံမှာဆေးစစ်ထားတယ် ရွှေပြည်သာတရားရုံးမှာ ချုပ်ရက်ရီမန် ၂ပတ် ယူပြီးစစ်ဆေးနေပါတယ် တရားစွဲတင်နိုင်ရေးဆောင်ရွက်နေပါတယ် ဟု ရွှေပြည်သာလှော်ကားနယ်မြေ ရဲစခန်းမှ စခန်းမှူး ရဲအုပ် စိန်အောင်ကပြောသည်။ကိုကိုခိုင်(ရွှေပြည်သာ) Crd-ရွှေမြင့်ဦး
စိတျ ကနျြးမာရေးကွောငျ့ အိမျမှာသံကွိုးခညျြထားသူမိနျးကလေးကို အဓမ်မပွုကငျြ့ရနျကွံတဲ့ဘေးအိမျမှ လူကို ရပျကှကျမှ ဝိုငျးဖမျး
စိတျကနျြးမာရေး မကောငျး၍ နအေိမျတှငျးမှာသံကွိုးခညျြထားသူအမြိုးသမီးကို အဓမ်မပွုကငျြ့ရနျကွံစညျသောဘေးအိမျမှ အမြိုးသား ကိုဖမျးဆီးအမှုဖှငျ့ . .ရှပွေညျသာ မလေ ၅ ရကျ
ရှပွေညျသာမွို့နယျ ဘုံရှညျကုနျးရပျကှကျတှငျ ခွံခငျြးကပျလြှကျ နထေိုငျပွီး စိတျကနျြးမာရေးမကောငျးသညျ့ အသကျ၂၀အရှယျ အမြိုးသမီးအား အဓမ်မပွုကငျြ့ရနျ ကွံစညျ အားထုတျသူအမြိုးသား ကို ဖမျးဆီးအမှုဖှငျ့စဈဆေးနေ ကွောငျး ဒသေခံမြားထံမှသိရသညျ။
ဖွဈစဉျမှာ —ရှပွေညျသာမွို့နယျ ဘုံရှညျကုနျးရပျကှကျ ဝါးရုံမွိုငျလမျး အမှတျ၈/၅၈ နေ ဦးကြျောကြျောသှငျ၏သမီးဖွဈပွီး စိတျကနျြးမာရေး မကောငျးသူ မ— ၂၀ နှဈ သညျ မေ၁ရကျနနေံ့နကျ၉နာရီခြိနျခနျ့ က နအေိမျရှခေ့နျး တှငျရှိနစေဉျ ခွံခငျြးကပျလြှကျ ဘေးအိမျမှ
ဦးမွငျ့သိနျးဦး (၄၈)နှဈ သညျ နောကျဖေးပေါကျမှရောကျရှိလားပွီး မအေးမှနျကြျောကို အဓမ်မပွုကငျြ့ရနျကွံစညျခဲ့၍ ဖခငျဖွဈသူက ရှပွေညျသာ လှျောကားနယျမွရေဲစခနျးသို့ အမှုဖှငျ့တိုငျတနျးခွငျး ဖွဈကွောငျးတိုငျတနျးခကျြအရသိရသညျ။
သမီးကစိတျကနျြးမာရေးမကောငျးလို့ အိမျထဲမှာပုခကျနဲ့သံကွိုး ခညျြထားတာပါ ဒါကို လာပွီးလုပျတာပါ ပွဈမှုကြူးလှနျသူက ဘေးအိမျကပါ မွငျတဲ့သူက မခငျမွတျမှနျထှေး အသကျ(၁၂)နှဈ (၄)တနျးကြောငျးသူ ကြှနျတော့သမီးအငယျပါ
သူကအိမျရှေ့ မှာကစားနတေုနျး သူအမ အေးမှနျကြျောအိမျထဲကနေ အျောသံကွား လို့ အိမျထဲပွနျပွေးဝငျကွညျ့တာ အမဖွဈသူဘောငျးဘီကြှတျနတေယျ မွငျ့သိနျးဦးက ပုဆိုးကှငျးသိုငျးနဲ့တှရေ့တယျတဲ့ သမီးက မွငျ့သိနျးဦး ကို ငါ့အဈမကိုဘာလုပျတာလညျး အျောပွောပွီး အပွငျထှကျကာဘေးလူတှကေို အျောဟဈအကုအညီတောငျးပွီး ဖမျးလိုကျကွတာပါ။
ကြှနျတျောလညျးနခေ့ငျြးပဲအမှုဖှငိ့လိုကျတယျ အမှုစဈကစခနျးမှူးကိုယျတိုငျပါ။ ပုဒျမက (၃၇၆ /၅၁၁)ပါ။ဟုတရားလိုဖွဈသူ မ–၏ဖခငျ ဦးကြျောကြျောသှငျကပွောသညျ။
ယငျးအမှုအား ရှပွေညျသာလှျောကားရဲစခနျးမှ ရှပွေညျသာမွို့နယျ ဝါးရုံမွိုငျလမျး ၈/၅၇ ဦးထှေးတငျ၏ သားဖွဈသူ မွငျ့သိနျးဦးအားရာဇသတျကွီး ဥပဒပေုဒျမ ၃၇၆/၅၁၁တို့ဖွငျ့အမှုဖှငျ့စဈဆေးလြှကျရှိသညျ။
မလေ ၂ ရကျက အငျးစိနျဆေးရုံမှာဆေးစဈထားတယျ ရှပွေညျသာတရားရုံးမှာ ခြုပျရကျရီမနျ ၂ပတျ ယူပွီးစဈဆေးနပေါတယျ တရားစှဲတငျနိုငျရေးဆောငျရှကျနပေါတယျ ဟု ရှပွေညျသာလှျောကားနယျမွေ ရဲစခနျးမှ စခနျးမှူး ရဲအုပျ စိနျအောငျကပွောသညျ။ကိုကိုခိုငျ(ရှပွေညျသာ) Crd-ရှမွေငျ့ဦး